❤️ IGTV Shopping ngoku iyafumaneka kwi-Instagram - Facebook
I-Instagram ibhengeze kwangoko kule nyanga ukuba i-IGTV yokuthenga ngoku isehlabathini lonke.
Impumelelo enkulu yento yokuthenga iza emva kwesondlo seendaba, ibali kunye nezithuba ezihlala zisetyenzisiwe ngamashishini amaninzi kunye nabanini beempawu.
I-Instagram ixeliwe ukuba malunga ne-130 yezigidi zabantu bajonga iindawo zokuthenga nyanga nganye.
Ukunikwa la manani, yayivakala ngokugqibeleleyo uku I-Instagram yazisa umsebenzi we-IGTV wokuthenga.
Injongo yoqobo yokusebenza kwevenkile yayikukunceda amashishini akhule ngakumbi kwaye, ukusuka kwi-Instagram, I-60% yabasebenzisi iyavuma ukuhlola kunye nokufumanisa iimveliso ezintsha kwi-Instagram.
Ukuba awukacwangcisi ivenkile yakho ye-Instagram okwangoku, sicebisa ukuba uyenze. Izinto ziguquka ngokukhawuleza kunangaphambili, kunye nenqaku levenkile ibe yinto enkulu kubathengisi be-Insta.
Babeluncedo olukhulu kubasebenzisi ngokubanceda bafikelele kubaphulaphuli babo ngendlela elula nefanelekileyo..
Uhlaziyo olukhawulezileyo lwe-Instagram kunye notshintsho luqinisekisa ukugcina abasebenzisi babo bebanjiwe. Emva koko, Qiniseka ukuba uyinxalenye yayo kwaye ubambe abaphulaphuli bakho ngokuthenga kwe-IGTV.
Ngaba kufanelekile ukuba usebenzise i-IGTV yokuthenga kwi-brand yakho?
Ukuthenga kwe-IGTV lithuba elinika umdla labaphembeleli kunye nabadali abasebenzisa iqonga labo ukunxibelelana nabaphulaphuli babo, ukufumana imali eyongezelelweyo ngaphandle kwamandla.
Ukuthenga kwe-IGTV kuyakuvumela ukuba umake iimveliso othetha ngazo kwiividiyo zakho, ngqo kwezi vidiyo.
Oku kusebenza kuyafana nokuvumela ukumaka umntu kwifoto., kodwa ngokumaka imveliso endaweni yoko.
Ngaphambili, Abasebenzisi babenomda kwindlela abanokuthi babhengeze ngayo iimveliso abazikhuthazayo kwiividiyo zabo.
Enkosi ngokubakho kweemveliso zokumakisha, akusafuneki ukuba ushiye amakhonkco amaninzi kwiingcaphuno zevidiyo zakho.
Esinye isixhobo esinamandla ngumsebenzi wecashier, kodwa okwangoku ifumaneka eUnited States. Xa isemhlabeni jikelele, izinto ziya kutshintsha ngonaphakade.
Ukukwazi ukujonga imveliso, Ukuchukumisa ukuthenga kunye nokuphuma kwi-Insta kuzakutshintsha indlela abantu abasebenzisa ngayo i-Insta ukuthenga.
Inyaniso, I-70% yabathengi babuyela kwi-Instagram ukuze bajonge iimveliso ezintsha.
Kuninzi okutshintshileyo kwezi nyanga zidlulileyo, kwaye kuya kufuneka uqiniseke ukuba usebenzisa onke amanqaku akhoyo ngoku kwingingqi yakho ukuze wandise impumelelo yakho.
Ixesha elizayo lokuthenga kwe-IGTV
Ukuthenga kwe-IGTV kusetelwe ukuba kuphakame kwaye kunokuba yeyona ndlela ilungileyo yokutsala abathengi bakho.
Enkosi kwifomathi yevidiyo, ukukhala kwaye ngoku kwimibhalo engezantsi, Umxholo wakho ufikeleleka ngakumbi kunangaphambili. Umxholo wakho uyafikeleleka ngakumbi, kokukhona abaphulaphuli bakho baya kuba. Oku kuyintengiso kulo lonke uzuko lwayo.
Ngexesha lobhubhane, I-Instagram ihambe ubude obukhulu ukukhupha izinto ezintsha ezinje ngomsebenzi wevenkile, ikhowudi ye-QR kwaye ngoku i-IGTV Shopping.
Eyona njongo yabo iphambili ibikukunceda iinkampani, amanqaku, abachaphazeli kunye nabantu ngabanye ukufikelela kwinqanaba eliphezulu.
Kuya kufuneka ulithathe eli xesha ukuphinda ucinge kwakhona kwaye uphinde ubeke iindlela zakho zokuthengisa ngokwenza uninzi lwento nganye abayinikelayo..
Ungababamba njani abaphulaphuli bakho ngeevidiyo
Ukuba ufuna ukufumana okona kuthengiweyo kwi-IGTV, Okokuqala kufuneka uqiniseke ukuba unokunxibelelana nabaphulaphuli bakho ngeevidiyo.
IiVidiyo zinokuba yindlela enamandla kwaye elula yokukhulisa ubukho bakho be-Insta, kuxhomekeke kwindlela onokunxibelelana ngayo kunye nokuzibandakanya kubunzulu kunye nabaphulaphuli bakho.
Iividiyo zibonisa ukuzinikela kwakho kwaye zinokusetyenziselwa ngokulula ukwabelana ngebali lakho lebrendi. Awuniki kuphela iwindow kumava akho, kodwa abaphulaphuli bakho banokuziva ukuthanda kwakho into oyikhonzayo.
Zininzi iindlela zokuzibandakanya nabaphulaphuli bakho, umzekelo:
• Ukuqaqambisa iimpawu zeemveliso
• Yenza iimveliso ezintsha
Umxholo okhethekileyo ngaphambi kokuqaliswa kwemveliso
• Ukulungiselela iinjongo zemfundo
• Iiseshoni zoqeqesho
Landela le miyalelo ingezantsi ngendlela yokulayisha ividiyo kwaye uqale ukwabelana ngebali lakho nabalandeli bakho namhlanje..